Inkqubo yokutsala evaliweyo ye-1 ye-PUSH BLOCK iqhosha ukunciphisa umngcipheko wosulelo.
2. Eyi-360°iadaptha ejikelezayo ibonelela ngenduduzo efanelekileyo kunye nokuguquguquka kwabo bobabini abaguli nabongikazi.
I-port ye-3 yonkcenkceshelo exhotyiswe nge-valve yendlela enye ivumela i-saline eqhelekileyo ukucoca i-catheter ngokufanelekileyo.
I-4.MDI port yokuhambisa iziyobisi ngokufanelekileyo, ngokukhawuleza nangokufanelekileyo.
5. Kuboniswa kwiiyure ezingama-24-72 ukusetyenziswa okungagungqiyo.
Ilebheli yomonde enomhla weeveki.
8. Sleeve catheter olomeleleyo.
Ukudibanisa iTyhubhu ne-Yankauer Handle
1. I-catheter yokutsala i-Yankauer ihlala isetyenziswa kunye ne-tube yokuxhuma, kwaye yenzelwe ukutsala ulwelo lomzimba ngokudibanisa ne-aspirator ngexesha lokusebenza kwi-thoracic cavity okanye kwisisu esiswini.
2. Isiphatho seYankauer senziwe ngezinto ezibonakalayo ekubonakaleni okungcono.
3. Iindonga ezivaliweyo zetyhubhu zibonelela ngamandla aphezulu kunye nokuchasana nokuncitshiswa.
Imaski yeoksijini yenziwa yimaski ye-aerosol kunye ne-oxygen tubing egubungele umlomo kunye neempumlo kwaye ifakwe kwi-tank yomoya. Isigqumathelo seoksijini sibonisa imitya yelastiki kunye neziqwengana zempumlo ezinokuhlengahlengiswa ezenza ukuba zilunge ngokugqwesileyo kubungakanani bobuso. I-Oxygen Mask kunye neTubing iza ne-200cm yokuhambisa i-oksijini, kwaye i-vinyl ecacileyo kunye ne-soft inikeza isigulane esikhulu kwaye ivumela ukujonga okubonakalayo. I-Oxygen Mask kunye neTubing ifumaneka ngombala oluhlaza okanye obala.
Ukusetyenziselwa into enye kuphela, kuthintelwe ukusebenzisa kwakhona.
2.Sterilized yi-ethylene oxide ayisebenzisi ukuba ukupakisha kumoshakele okanye kuvulekile.
3.Store phantsi komthunzi, opholileyo, owomileyo, umoya, nococeko.